जुलाई बर्थस्टोन - जुलीका लागि रूबी रत्न - नयाँ अपडेट २०२१
रूबी जुन ढु stone्गाको र of्गको पुरानो र आधुनिक दुबै सूचीको अनुसार जुलाईको बर्थस्टोन हो। जुली बर्थस्टोन रिंग वा नेकलेस गहनाका लागि उत्तम रत्न।
जुलाईको बर्थस्टोनको अर्थ के हो?
एउटा जन्मस्टोन भनेको एउटा रत्न हो जुन जुलाई महिनाको जन्म महिनासँग सम्बन्धित छ: रगतy. माणिक, जुलीका लागि यो रत्न, रत्नको राजा मानिन्छ र प्रेम, स्वास्थ्य र बुद्धिले प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो राम्रो रातो लगाएको विश्वास गरिएको थियो ruby यसको मालिकलाई राम्रो भाग्य दियो। A ruby सब भन्दा मूल्यवान रत्न हो र यसको रंग र गुणवत्ताको आधारमा यसको मूल्य बढ्छ।
जुलाईको बर्थस्टोन रंग के हो?
जुलाई जन्मस्टोन कहाँ पाइन्छ?
जुलाई बर्थस्टोन गहना के हो?
जुलाई बर्थस्टोनको राशिफल के हो?
A ruby रातो रंगको रत्न हो, खनिज कोरन्डमको एक किसिम। रूबी परम्परागत कार्डिनल रत्नहरू मध्ये एक हो। रुबी शब्द रबेरबाट ल्याइएको, रातोको लागि ल्याटिनबाट आएको हो। रूबीको रंग एन्टिमेन्ट क्रोमियमको कारणले हो।
उत्तम ruby एक शुद्ध, जीवन्त छ लाल थोरै गर्न अशुद्ध लाल रंग धेरै बजारहरूमा, शुद्ध रातो रंगहरू उच्च मूल्यहरू आदेश दिन्छ र ruby सुन्तला र बैजनी को overtones संग कम मूल्य छन्। र finest न त धेरै गाढा र न धेरै हल्का हुनुपर्दछ उत्कृष्ट गुणवत्ता मानिन।
यो Mogok माथिल्लो म्यानमारमा उपत्यका शताब्दीयौंको लागि विश्वको मुख्य स्रोत थियो रूबी। ऐतिहासिक रूपमा, रूबी थाईल्याण्ड, कम्बोडियाको पाइलिन र सामलउट जिल्लाका साथै अफगानिस्तान, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, कोलम्बिया, भारत, नामिबिया, जापान र स्कटल्याण्डमा पनि खानी आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि रुबी भण्डारहरू मेडागास्कर, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तन्जानिया र भियतनाममा भेटिए।
हामी रुबीको औठी, कंगन, झुम्का, हार र अन्य धेरै बेच्दछौं।
माणिक प्रेम, स्वास्थ्य र बुद्धिले प्रतिनिधित्व गर्दछ। राम्रो रातो लगाएर ruby यसको मालिकलाई राम्रो भाग्य दिनुहोस्।
रूबी एक सुरक्षात्मक ढु stone्गा हो जसले खुशी र जोश ल्याउन सक्छ। रूबी एक प्रियजनको लागि वा भ्यालेन्टाइन डे वा वार्षिकोत्सव जस्तो अवसरहरूको लागि उत्तम उपहार दिन्छ। को rubyरue र ofको र to्गको नजिक छ, जसले शरीरको सबै अ oxygen्गहरूमा अक्सिजन बोक्छ, रत्नले जीवन शक्ति र जोसलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। ढु stone्गामा शरीरमा प al्क्तिबद्ध गर्न र उर्जा दिन शक्ति छ। रूबी नकारात्मक निकायहरूबाट जोगाउनुहोस् जुन सकारात्मक उर्जा लीक गर्दछ, आत्मिक जीवन शक्ति र समग्र स्वास्थ्य राम्रो गर्दछ।
क्यान्सर र लियो ढु stones्गा दुवै जुलीका लागि रत्न हो।
जे भए पनि तपाई क्यान्सर र लियो हो। रूबी जुलाई १ देखि from१ सम्मको ढु stone्गा हो।
जुलाई 1 क्यान्सर रूबी
जुलाई2क्यान्सर रूबी
जुलाई3क्यान्सर रूबी
जुलाई4क्यान्सर रूबी
जुलाई5क्यान्सर रूबी
जुलाई6क्यान्सर रूबी
जुलाई7क्यान्सर रूबी
जुलाई 8 क्यान्सर रूबी
जुलाई9क्यान्सर रूबी
जुलाई 10 क्यान्सर रूबी
जुलाई 11 क्यान्सर रूबी
जुलाई 12 क्यान्सर रूबी
जुलाई 13 क्यान्सर रूबी
जुलाई 14 क्यान्सर रूबी
जुलाई 15 क्यान्सर रूबी
जुलाई 16 क्यान्सर रूबी
जुलाई 17 क्यान्सर रूबी
जुलाई 18 क्यान्सर रूबी
जुलाई 19 क्यान्सर रूबी
जुलाई 20 क्यान्सर रूबी
जुलाई 21 क्यान्सर रूबी
जुलाई 22 लियो रूबी
जुलाई 23 लियो रूबी
जुलाई 24 लियो रूबी
जुलाई 25 लियो रूबी
जुलाई 26 लियो रूबी
जुलाई 27 लियो रूबी
जुलाई 28 लियो रूबी
जुलाई 29 लियो रूबी
जुलाई 30 लियो रूबी
जुलाई 31 लियो रूबी
हाम्रो रत्नको पसलमा बिक्रीको लागि प्राकृतिक जुलाई बर्थस्टोन
सगाई रिंगहरू, नेकलेसहरू, स्टड इयररिंगहरू, ब्रेसलेटहरू, पेंडन्टहरू ... को रूपमा हामीले जुलाई बर्थस्टोनको गहना बनाउँदछौं। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।
रूबी 2.12 CT
रूबी 2.24 CT
रुबी जोडी 2.96 c ct
रुबी जोडी 6.93 c ct
रूबी 2.07 CT
तारा रुबी 3.02.०२ सीटी
तारा रुबी 3.07.०२ सीटी